Ogaden News Agency (ONA) – Abwaan Cabdullaahi Macalin Axmed Dhoodaan
Abwaan cabdullaahi Macalin Axmed Dhoodaan ayaa kugeeriyoday magaalada Harar taarikhdu markay aheyd 26 April 2013. Allaah ha u naxariiste Abwaanka ayaa da’diisa lagu qiyaasay innuu ahaa 72 jir waxuuna Harar u tagay arrimo caafimaad, ehelada abwaanka ayaa noo sheegay in Marxuumku uu lahaa xanuunka Neefta loo yaqaano (athma).
Marxuum Cabdullaahi Macalin axmed dhoodaan oo leh taariikh aad u dheer islamarkaasna kamida dadka ugu magac dheer Geeska Afrika waxa uu ku dhashay gobolka Doollo ee Wadanka Ogadeniya ee ku hoos jira gumeysiga madow ee Abbysinia.
Abwaan dhoodaan waxa uu magaciisa ku helay oo ku caan baxay gabayadi uu u tiriyay halgamadi jabhadihi Nasrullaahi iyo WSLF ee daggaalka xoriyad doon kula jiray gumeysiga Ethiopia isaga oo tiriyay gabayo wadaniyadeed oo uu ku guubaabinayo ummada somaliyeed ee halganka ku jirta.
Abwaan Dhoodaan ayaa sidoo kale loo tixgaliyay innuu yahay abwaanka qarniga, Abwaanka ayaa waxa uu kula jira safka hore gabayaagi ka horreeyay ee caanka ka ah taariikhda somalida sida , Sayid Maxamed Cabdulle XassanRaage Ugaas iyo Qamaan Bulxan.
Abwaan Macalin Dhoodaan waxuu gaar ku ahaa oo uu hal abuurkiisi ku sameeyay gabayga nooca Jacburka loo yaqaano. Isaga oo hal abuurkiisa goonida ah ku matala waxyaalo aan islaheyn waxa uu abwaanku isku bar bar dhiga waxyaalo cajiib ah midaas oo aad looga helay aadna loogu jecleystay hal abuurka abwaanka. hal abuurkaas ayaa ah mid suugaanta addunka oo idil ka jirta ku cusub hal abuurka suugaanta somaliyeedna kor ugu qaaday.
Abwaanku yaraantiisi waxa uu kamid ahaa ururka dhalinyarada ee jabhadii Nasrullaahi. oo ah meeshii uu magaciisa ka helay looguna aqoonsaday Abwaanka suugaantisa iyada oo abaabul badan ka geystay kicinta bulshada. gabayadii uu Waqtigi Jabhadi Nasrullahi (Ogaden Liberation Fronnt) uu tiriyay waxaa kamid ahaa Gabaygiisii
“War Ha u liicinaay Xabashi waa lag damaynaaye”
Abwaan dhoodaan gabayadiisa inta badan waxa uu u tiriyay dhulka Ogaden waxuuna guubabo badan siiyay dadkaas dhulkaas daga sidii ay iyagu aayahooda uga tashan lahaayeen halganka dhulkoodana ay iyagu ugu istaagi lahaayen. gabayadi uu tiryay abwaanku waxaa kasoo qaadanayna mar uu Guuto kamid ah Jabhadi WSLF lahadlayay waxuuna gabaygiisa mariyay
Nacabkii Hoggaan kugu Xidhee, Heerya kugu Qaata
Hantidana Banaanka kaa tubee, Hoygii kaa bixiya
iyo waxii ku hoosaasiyaa, waa isla halkiiye
War ha ukala hanbaynina daggaal, Haayirkiyo tuugga
oo sidaa Xornimo aan helliyo, hodan ku raadceeya.
Abwaan dhoodaan allaah ha u naxariiste gabayadiisii ugu caansanaa iyo taariikhdisa halkan kumasoo koobikarno. Waxaanse kusoo gabagabayn meerisyo gabayadisi mid kamid ah oo uu tiriyay sanadkii 1974.
Waxaynu saaka uga maagannaa, waa macno la’aane
Waxaan allaah uga baryayna Danbi dhaaf iyo in naxariistiisa waasaca ah in Allaah siiyo Macalin dhoodaan oo inbadan ku soo halgamay suugaantisa.
Wali waxaa dhulka Ogadeniya ka socda dagaalka lagu raadinayo xoriyada iyo lagdankii u dhaxeeyay Xabashida (oo ah Abbysinia) Iyo Somalida Ogadeniya.